आफ्नो मानिसहरूको संस्कृति को बोक्ने रूपमा आधुनिक मानिस
कुनै पनि व्यक्ति यो संसारमा जन्म, आमा गरेको दूध संग, राष्ट्रिय संस्कृति अवशोषित यसलाई आफ्नो मूल भाषा को सम्पत्तिको लाग्छ। जीवित आदेश र मान्छे को परम्परा जीवन आफ्नै तरिका हुन्छन्। त्यसैले, एक मानिस, मान्छे को संस्कृति को एक वाहक रूपमा, organically संग फ्यूज। दुर्भाग्यवश, आधुनिक जीवन सधैं जायज छैन एकता छ।
समाज र धन
पहिलो, व्यक्ति विचार गर्नुहोस्। अलग, हामीलाई प्रत्येक - एक, सभ्य साहसी, लगनशील र जिम्मेवार। एउटै मामला मा, टोलीमा एक व्यक्तिको स्थान, निरन्तर आफ्नो व्यक्तिगत विवेक आधारित निर्णयहरू उहाँलाई हटाइ भने, यो धेरै बुरा बन्नेछ।
धेरै व्यक्ति आफ्नो मान्छे को संस्कृति को एक वाहक छ भन्ने विश्वास गर्छन्, यो जीवन को सबै सामाजिक पक्षहरू नजिक संघ छ। तर यो त छ! निस्सन्देह, मान्छे गर्नुभएको कुनै पनि सामाग्री वस्तु केवल एक विशेष उद्देश्य हासिल गर्न। तर, कुनै पनि कुरा, रूप, साँच्चै, र सामाजिक घटना, पनि आफ्नो प्राकृतिक उद्देश्य वहन। यसलाई स्वतन्त्र कानुन विषय हो। उदाहरणको लागि, उपकरण प्रयोग को बहुमुखी।
यसबाहेक, यो समाज को गठन रूपमा, वस्तु fetishism मानिसको संसारको कुराको predominance एक विशेषता सुविधा भएको छ कि पहिचान छ।
बहुमुखी प्रतिभा एक राजनीतिक, वा भौतिक कुराहरू मात्र निहित छ। यो पनि समाज आध्यात्मिक क्षेत्र मा साधारण छ। यो कुनै दुर्घटना एकपल्ट यो पनि Nikolay Rerih भने: "संस्कृति हृदय छ।"
भाषा र संस्कृति inextricably लिङ्क छन्
संस्कृति, equivalently, भाषा रूपमा - यो व्यक्तिगत मानिसहरूको worldview पहुंचाता कि चेतना अभिन्न भाग हो। दुर्भाग्यवश, हालका समयमा अधिकांश मानिसहरू मूल भाषामा, कम से कम, लापरवाही भन्न बुझाउँछ। यदि छैन त लामो पहिले हामी खुल्लमखुल्ला शब्दावली Ellochka ogress को "प्रशस्त" मा हँसे, तर आज यो अब एक मुस्कान गराउँछ।
संस्कृति छैन - समस्या धेरै जवानहरू मुख्य कुरा नबुझेका छ साक्षर भाषण असम्भव। भाषा को सामाजिक प्रकृति यसको वाहक नजिक सम्पर्क मा नै प्रकट र जीवन भाषण दल, जहाँ यो संचार को लागि एक उपकरण रूपमा प्रयोग गरिन्छ को गठन बिना असम्भव छ।
भाषा र वास्तविकता बीच आफ्नो मान्छे को संस्कृति को बोक्ने रूपमा, एक सोचाइ व्यक्ति हो। फलस्वरूप, मौलिक घटक, एक अर्को बिना अवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ जो, संस्कृति, भाषा र विचार हो। सँगै, तिनीहरूले वास्तविक संसारमा बाँधिएको, तिनीहरूले उहाँलाई विषय, समानान्तर मा, यो सिर्जना हो उसलाई विरोध र।
पक्कै, संस्कृति को अन्तरक्रिया भएको छ र सधैं हुनेछ! यो प्राकृतिक coexistence सामान्यतया आफ्नो कुल आपसी संवर्धन गर्न जान्छ। मान्छे एक विदेशी भाषा सिक्न, यो मूल वक्ता को संस्कृति अवशोषित। संसारको मूल संस्कृति को मूल तस्वीर थप accumulates मा, पक्ष जोड दिंदै र अगाडिको मधुरो।
तथ्याङ्क अनुसार, विदेशी भाषा शिक्षक, काम 30 वर्षभन्दा तिनीहरूले सिकाउन भाषा को संस्कृति मा निहित विशेषताहरु प्राप्त। वस्तुतः सबै संसारको भाषा परस्पर छन्। पहिले नै अमीर रूसी, दुर्भाग्य, धेरै सक्रिय विदेशी शब्द र परिभाषा धेरै अद्यावधिक। तर, एक व्यक्तिले आफ्नो मान्छे को संस्कृति को एक वाहक छ, जबकि आफ्नो व्यक्तित्व कायम राख्न खोज्छ।
यसको संस्कृति को जाँगरको एउटा महत्त्वपूर्ण साइन - अर्को को उपलब्धिहरू पनि बुझ्न मान्छे को क्षमता। यो क्षमता छैन केवल राष्ट्रको जीवनको नींव सुधार, समृद्ध, तर पनि यो सम्भव उदार आफ्नो आध्यात्मिक परम्परा साझेदारी गर्न बनाउँछ। आपसी समझ र अन्तर्राष्ट्रिय संघर्ष समाप्त गर्न मद्दत सुनिश्चित गर्दछ।
राष्ट्रिय संस्कृति डेमोग्राफिक र सामाजिक समूहहरू वा जनसंख्याको क्षेत्रहरु - यो मानिसहरूका थप subculture छ। यो राष्ट्रको साधारण स्वीकार मान्यता फरक हुन्छन् भन्ने जीवन, व्यवहार र सोच को आफ्नो बाटो मा व्यक्त गरिएको छ। यो एक हडताली उदाहरण: को युवा आन्दोलनहरु, अपराधी विश्व, धार्मिक आन्दोलनहरु। कहिलेकाहीं उपसभ्यताहरू समर्थकहरूको एक कठिन विरोध हो र समाज को आराम संग टकराव आउन।
निस्सन्देह, सबैले, आजको संस्कृति मा रुचि गर्न सक्नुहुन्छ साथै आवश्यक प्राचीन लोक बुद्धिको opulence को सबै रूपमा छुटकारा गर्न। तथापि, पहिलो र मुख्य प्रगति द्वारा dictated गर्नुपर्छ जगेर्ना वा सबै मानिसहरूको लागि undeservedly भूल परम्परा को बहाली, भन्दा आफ्नो originality संरक्षण गर्ने इच्छा के मई आउनुहोस्। स्वाभाविक, यो सम्भव हराएको लागि शोक तथापि, सभ्यता को अन्य लाभ अस्वीकार यसको संरक्षण खातिर मात्र छैन छ।
किन सेतो गुलाब दिन र तिनीहरूले प्रतीक भनेर?
पृथ्वीको happiest मान्छे, तिनीहरू को हुन्?
मास्को - ताशकन्द: एक अविस्मरणीय यात्रा
ओखर - बाल रंग प्राकृतिक सौन्दर्य हाइलाइट गर्न सक्षम,
जापानी अनुहार मालिश
अगस्ट मा Trang: विवरण, विशेष गरी छुट्टी, मौसम, र समीक्षा
अप्रत्याशित र बलियो महिला, Valery को नाम वा के हो